एमालेले पनि पठाउने भयो सभामुखसहित ५ यी जनालाई घर, के छ ओलीको मास्टर प्लान ? — Imandarmedia.com
एमालेले पनि पठाउने भयो सभामुखसहित ५ यी जनालाई घर, के छ ओलीको मास्टर प्लान ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सभामुख र चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ ।
१४ सांसदलाई कारवाहीको सूचना ननिकाल्ने सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोट र संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
आइतबार साँझ मात्रै एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिवालयको बैठक गरेको नीतिगत निर्णयका आधारमा संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका थिए ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बचाउ गर्ने आफूहरुको मनसाय नभएको बताएका छन् । सोमबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय र प्रवृत्तिको मात्र आफूहरुले विरोध गरेको बताएका हुन् ।